/Blog/garari/DECA powder-Mazano Ekupedzisira Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (Durabolin)
Posted on 05 / 30 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Chii Nandrolone Decanoate(DECA)
Nhasi, vazhinji vanogadzira muviri vanosarudza kuvarisa steroids kuti vawedzere musimba wavo. Nandrolone Decanoate, inozivikanwa seDDECA, inotengeswa pasi pezita rinonzi DECA-Durabolin, ndeimwe yezvine steroid ine simba inopa zviitiko zvinonakidza kana munhu akaroorwa kumba. Kana iwe uri mutsva munharaunda, unogona kunge uchibvunza kuti Deca Durabolin chii uye kuti chii chingaita kwauri. Pano pane zvimwe zveNandrolone Decanoate (DECA) zvakasarudzwa kubva kune vamwe.
Nandrolone Decanoate (DECA) inononoka kuita steroid, uye izvi zvinoita kuti zvive zvakakurumbira. Chii chinobatsira kushandisa steroid slower? Iyo yakareba hafu yeupenyu, inotora nguva yakareba kuti steroid ibve mumuviri. Uyezve, izvi zvinoreva kuti danda reNandrolone Decanoate harifaniri kugara riripo. Iwe unongoda kuwana jekisi mushure memavhiki matatu, kusiyana nemamwe maungada kuwana jab vhiki nevhiki.
Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) inoratidzwawo nemashoma emigumisiro, zvichiita kuti vave shamwari kune avo vanoda kutarisira zvakanaka utano hwavo. Izvozvo zvisinganyanyi kuipa nemigumisiro ndeyokuti inowanzoshandura ku estrogen.
Migumisiro ye Nandrolone Decanoate mukugadzira muviri
-Improve hutano hwakabatana
-Dzerai musimba musimba
Wamboenda kumitambo yekurovedza uye haagoni kuita chero basa ripi zvaro nekuda kwekuneta sezvo basa rako rekupedzisira richibuda? Mushure mekushandiswa kweNandrolone Decanoate, iwe uchacherechedza kuti iwe unogona kudzoka kubva pane zvawakamboita uye unokwanisa kuita zviri nani munguva inotevera.
Kuvandudza hutano hwakabatana
Hapanazve kurwadziwa pamwe chete nekushandiswa kweNandrolone Decanoate sezvo zvichivimbisa kuti nguva dzose vane hutano hwakanaka.
Pasina simba rakakwana, zvinangwa zvako zvekuvaka muviri zvingava zvisina maturo. Kune rumwe rutivi, kana iwe uine simba, iwe unogona kusimudza mashizha makuru nekudaro unowedzera misumbu yakawanda. Nandrolone Decanoate powder kunowedzera simba rako, zvichikubvumira kuti urove zviyero pane simba guru.
Wedzerai miviri yakaonda
Nandrolone Decanoate ine unyanzvi hwekuvaka masimba, uye chinhu chakanaka ndechokuti inongowedzera pane musonda musimba mass.
Iwe unoda here kuita kuti basa rako rive rakakosha? Kushandisa Nandrolone Decanoate kunobatsira pakuita kuti maitiro ako ekugadzirira awedzere kubudirira, zvichiita kuti uwane chimiro chawave uchichida munguva pfupi.
Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (DECA)
Nhanho 1: Shandisai Nandrolone Decanoate powder mukabheki.
Danho 2: Wedzera BA neB BB.
Nhanho 3: Zvinotapira zvinotanga kuparara muhupfu. Ita kuti musanganiswa wacho unyatsokurumidza kuti uite.
Nhanho 4: Wedzera Sesame mafuta kumhinduro uye uite kuti uite.
Danho 5: Ita sarudzo inopisa inopisa muyiriniti iyo inoshandiswa kufuta uye kuisa sindano mukati meSirring filter.
Nhanho 6: Sunga chigadziko
Makemikari iwe unoda kuigadzirira
Nandrolone Decanoate Recipe yeDECA 50ml imwe neimwe pa 200mg / ml
32.50ml sesame mafuta (Dzivisa mafuta akareba uye ayo unogona kunge uri kurwisa).
2.5 Benzyl doro 5% (Usazombopfuura 5% BA yekutendeuka kupi zvako waunoita)
Nhengo dzisina kuchena
Nhanho dzehanho nehanho pamusoro pekugadzira Nandrolone Decanoate
Step 1: Chienzanisa upfu hweNandrolone Decanoate kupinda mubheki.
Izvozvo zvinoitwa nekutora chigamba chemapuranga, kuchiisa pachiyero uye kuomesa tare kuitira kuti uremu hwepepa hurege kuwedzerwa paunenge uchiyera upfu hwako. Wedzerai pfupfu yako zvishoma nezvishoma kuitira kuti iwe usingafaniri kuchengetera shure mushure mokunge uine uwandu hwehupfu hwakatsetseka. Kuti uone kuti iwe wakarurama, tora chiyero chakarurama zvakakwana kune gramu. Kana ukangowana magiramu gumi, iwe zvino wakanaka kuenda.
Step 2: Wedzera BA uye BB.
Step 3: Izvozvo zvinotanga kupera muhupfu. Ita kuti musanganiswa wacho unyatsokurumidza kuti uite.
Iwe unogona kusunungura mhinduro yacho uchishandisa mvura yekushambidza mvura kuti iite nokukurumidza. Unozviita sei? Tora hari nemvura ugoiisa padhifu kuti ipise. Tora beaker inogadzirisa mhinduro uye isai masentimita mashoma mumvura. Iwe unogonawo kushandisa mvura inotonhorera kubva paketheni. Dzivisa mvura inopisa zvikuru nokuti inotungamirira kune huniyidheti saka inopesana nehurongwa.
Step 4: Wedzerai Sesame mafuta kumubhedha uye uite kuti uite zvakanaka.
Mafuta eSesame anofanira kuva nekushisa kwakafanana neyomugadziro wekubvumira mhinduro yacho kufamba zvakanaka. Chengetera chero hormone swirls iyo ingangodaro yakaumbwa uye inova nechokwadi kuti hapana kana munhu asati asvitsa kunzvimbo yekutsvina.
Step 5: Ita mhinduro yakadziya kupinda muvira iyo inoshandiswa kufuta nekubatanidza tsono mukati me syringe filter.
Shandisai zvimwe zvinomanikidza siriniti kuitira kuti mhinduro ishanduke uye inotora firati yacho itsva kana iwe ukaona kuti hurongwa huri kuchinonoka.
Step 6: Tora chikwata
Kana wangoitwa nehutachiona, mhinduro ikozvino yakagadzirira kushandiswa. Tora chidimbu kuti usasvibiswa.
Kana zvasvika pakutora steroidhi, kune marudzi maviri evanhu; avo vanotenga Nandrolone Decanoate kuti vatengese uye avo vanosarudza pamba kuibikira kubva kuNandrolone Decanoate. Mukushandisa zvose zviri zviviri, pane chinangwa chimwe chete; kuumba muviri wakanaka-kutarisa.
Kana ukasarudza kumba kusvuta steroid iwe pachako, saka iwe unofanira kunge uchiedza kuedza kuita nenzira yakarurama. Nokutevera kambani yeNandrolone Decanoate inopiwa pamusoro nzira yekuita Deca, iwe unogona kunge wakawana zvizere. Kupfuurira kana kushandisa zvishoma zvishoma kana zvinokonzera kana Nandrolone Decanoate powder inogona kuchinja kunaka kwe steroid yako.
Muzvokwadi, nemabhadharo akakodzera uye zvigadzirwa, unogona kunyatsogona homebrew Nandrolone Decanoate uye unoziva kuti unogona kuvaka muviri.
Nandrolone Decanoate, GJ Blokdijk, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, peji 1-170
Anabolic Steroids neAthlete- 2d ed, William N. Taylor. MD, peji 39
Mashandisiro Aungaita Trenbololone Recipe Kugadzira Trenbolone Enanthate Powder 2019 I10 Inonyanya Kufarirwa Anabolic Steroids Raws Material